September 2015 | ကမ်းလက်
ဖေ့စ်ဘုတ်က Dislike ထည့်မယ်ဆိုလား
in ဇင်ဝေသော်, တို့တိ တို့တိ - on 9/17/2015 - No comments
ရွာသားတစ်ယောက်က ပြောတယ်၊ တရုတ်သိုင်းကားဆိုလို့ မကြည့်ဘူးလို့ ဝင်ကြည့်တာ တွေ့တဲ့လူ ဝင်ရိုက်နေကြတာပါကွာ၊ သူတို့စကားကို နားမလည်ပေမဲ့ လေသံတွေကလည်း ဒေါသတကြီး အသံတွေချည်းပဲ တဲ့။
သူပြောတာ မဆိုးဘူး။ ပြေပြေပြစ်ပြစ် ပြောကြပြီး တွေ့တဲ့လူ ဝင်မရိုက်မိ ဖို့တော့ လိုမယ်။
ဖေ့စ်ဘုတ်က Dislike ထည့်မယ်ဆိုလား၊ ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ မြန်မာနဲ့ဂျပန် ယဉ်ကျေးမှုကိုကြည့်ရင် ပေါ်ပြူလာ သိပ်မဖြစ်လောက်ဘူး။ ဒီယဉ်ကျေးမှုနှစ်ခုက နိုးပြောရမှာ၊ မကြိုက်ဘူးပြော ရမှာကို အားနာတတ်တယ်။ လက်ရှိဖေ့စ်ဘုတ် ကွန်မင့်တွေကို ကြည့်ရင်တော့ ဒီယဉ်ကျေးမှု အားနည်းစပြုလာနေတာ တွေ့ရတယ်။
ဒါပေမဲ့ အမုန်းတရားတွေ လျော့သွားချိန်မှာ နှစ်ပေါင်းထောင်ချီနေတဲ့ ဒီယဉ်ကျေးမှုက နေရာ ပြန်ယူလာမှာပါ။
မွတ်စလင် လူဦးရေနဲ့ တချို့အဆုံးအမတွေက တခြားဘာသာတွေနဲ့ သဟဇာတ မဖြစ်ဘူးဆိုတာ မှန်ပါတယ်၊ ဘာသာရေး အမြင်သက်သက်က ကြည့်ရင် စိုးလည်းစိုးရိမ်စရာပါ။ နိုင်ငံရေးအနေနဲ့ကြည့်ရင် အာရပ် မွတ်စလင်တွေက ဂျီဟတ်ခေါ်နေတာကို အိန္ဒိယမွတ်စလင်တွေက ညင်းဆန်ပြီး ဟိန္ဒူတွေနဲ့အတူ အိန္ဒိယ လွတ်လပ်ရေးရဖို့ပဲ တိုက်ပွဲ ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်။
in ဇင်ဝေသော်, တို့တိ တို့တိ - on 9/16/2015 - No comments
လူမည်းချင်းတူတာတောင် အမေရိကရောက်နေတဲ့ လူမည်းတွေက
ရပ်သီချင်းတွေ ကမ္ဘာကျော်အောင်လုပ်ပြီး ရောင်းစားကြတယ်။
အာဖရိက လူမည်းတွေကတော့ မာရသွန်တွေပြေးကြတယ်။
ကူပြောပေးကြပါအုံး နောင်တော်၊ ညီတော်တို့
in ကစ်ဆင်းဂျား, ဇင်ဝေသော် - on 9/16/2015 - No comments
လူတိုင်း ကိုယ့်ဘာသာကိုချစ်ကြ၊ ဦးထိပ်တင်ထားလိုကြပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အချစ်လွန်သွားတော့ ကိုယ့်လူကိုတောင် သစ္စာဖောက်ဆိုပြီး သတ်ပစ် လိုက်ကြရော။ အဆုံးမသတ်နိုင်တဲ့ ဦးသူကသတ် ဘာသာရေး မုန်းတီးမှု ဇာတ်လမ်းရှည်ကို အဆုံးသတ်ဖို့ နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ကြတဲ့ အီဂျစ်ခေါင်းဆောင်၊ မစ္စတာ ဆာဒက်ကို သူ့ဘာသာဝင်၊ အစ္စလာမ် ဘာသာရေး အစွန်းရောက်တွေက သစ္စာဖောက်ဆိုပြီး သတ်ဖြတ် လိုက်သလို အစ္စရေးခေါင်းဆောင် ပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ရာဘင် ကို လည်း အစ္စရေး အစွန်းရောက်ကပဲ အလားတူ စွပ်စွဲချက်နဲ့ သတ်လိုက်ပြန် တယ်။
သူတို့ဟာနဲ့ သူတို့တော့ မှန်နေကြမှာပဲ။ ကိုယ့်ဘာသာတရားကို ချစ်တာ ကိုး။ ဒါပေမဲ့ ပါလက်စတိုင်း၊ အစ္စရေးကြားက စစ်ပွဲတွေ၊ လူသေမှုတွေ၊ ဒုက္ခရောက်ရမှုတွေ ပြောနေတာကတော့ အဲသလို မဟုတ်ဘူး။ အခု ဘာသာရေး အမုန်းအာဃာတကြီးတဲ့ လူငယ်မွတ်စလင်တွေဟာ ဘာသာရေး သွေးခွဲပေးတဲ့ မျိုးဆက်နှစ်ဆက်အတွင်း မွေးဖွား၊ ကြီးပြင်း လာရသူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။
ဒါတွေကို ကူပြောပေးကြပါအုံး နောင်တော်၊ ညီတော်တို့။
in ဇင်ဝေသော်, ပြန်လည်မျှဝေခြင်း - on 9/16/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared USoe Phoe Ni's post.
သတင်းမှန်ရင်တော့ ခပ်စပ်စပ်ဆောင်းပါးလေး ရေးချင်သား။
USoe Phoe Ni
NLD က ရွာထဲဝင်ပြီး တက်တက်ကြွကြွနဲ့ မဲဆွယ်တယ် …
ပြန်လည်းထွက်မယ်လုပ်ရော ရွာအဝင်လမ်းမှာ ကျောက်ပုံတွေနဲ့ ပြည့်နေတော့ ထွက်မရဘဲတိုင်ပတ်ရော …
လမ်းကလည်း အဲ့တစ်လမ်းဘဲရှိတော့ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်ကုန်တာပေါ့ …
ကျောက်တွေကလည်း ချပြီးသွားပြီလေ …
သူတို့ရွာထဲမှာ မဲဆွယ်နေတုန်း ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ လူတွေရောက်လာပြီး လမ်းခင်းဖို့ဆိုပြီး ပုံသွားတာပါတဲ့ …
ကာယကံရှင်တွေတော့ ခံရခက်ကြီး ဖြစ်နေမှာဘဲ …
သူတို့တွေမှာတော့ ရှေ့မှာအာပေါင်အာရင်းသန်သန်နဲ့ စည်းရုံးလိုက်ရတာ …
နောက်မှာတော့ ဘယ်ကမှန်း မသိတဲ့လူတွေက လမ်းခင်းဖို့ ကျောက်တွေလာပုံသွားတယ် ဆိုတော့လေ …
အကွက်တွေများ ပြောပါတယ် …
ရိုးသားလို့မရဘူးလို့ ပြောကြတာ ဖြစ်မယ် …
ဒါနဲ့ … အဲ့ရွာကလူတွေ ဘယ်ပါတီမဲပေးမလဲဆိုတာတော့ စိတ်ဝင်စားသားဗျ …
ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ စင်္ကာပူ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်
in Politics, ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 9/16/2015 - No comments
ဒီနေ့သတင်းစာပါ အင်တာနက်၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ စင်္ကာပူ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို ယှဉ်တွဲသုံးသပ်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးပါ။
၁။ အင်တာနက်နဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာကြောင့် လူထုပြောဆိုနေတဲ့ သတင်းစကားတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစိုးရအနေနဲ့ ထိန်းချုပ်ရခက်လာတယ် (အစိုးရအတွက် သိပ်မကောင်း)။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရ အရာရှိတိုင်း (ဝန်ကြီးချုပ် အပါအဝင်) ဆိုရှယ်မီဒီယာကို သုံးစွဲနေတော့ ကိုယ့်ခံစားချက်ပြောပြဖို့ ကြားခံပုဂ္ဂိုလ်၊ အတိုက်အခံ ပါလီမံကိုယ်စားလှယ် မလိုတော့ ဘူး။ အရင်က အစိုးရနဲ့ စကားပြောဖို့ တဆင့်ခံ လိုခဲ့တယ်။ (အစိုးရအားသာချက်၊ အတိုက်အခံအတွက် အားနည်းချက်)
၂။ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ တက်ကြွ၊ ပေါ်ပြူလာဖြစ်ပေမဲ့ ထောက်ခံမဲ မသေချာဘူး။ ပုံနှစ်ကို ရှုပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာက သတင်းဖြန့်ပေးရုံသာဖြစ်ပြီး မဲရဖို့ အာမ မခံ။ နောက်ပြီး ကိုယ့်အားနည်းချက်တွေကိုတောင် ဖော်ပြနေတတ်တယ်။ သဘာဝ ကျပါတယ်။ ဖေ့စ် ဘုတ်ပေါ် ဘယ်လောက် လိုက်ခ်လိုက်ခ်၊ ဘယ်လောက် ရှယ်ရှယ် စာအုပ်ထုတ်ရောင်း ရင် ပိုက်ဆံပေးပြီး ဝယ်ချင်မှ ဝယ်ကြမှာပါ။ မဲပေးတာလည်း အဲသလိုပဲ ဖြစ်မှာပါပဲ။ မြန် မာ အစိုးရထဲက ဖေ့စ်ဘုတ်မင်းသားနှစ်ယောက်ရဲ့ ဝေါကိုကြည့်ရင် ဒီကိစ္စက သိသာပါ တယ်။ သူတိုဆီမှာ အဘဆိုသူတွေပါသလို ကလော်တုတ်သူတွေလည်း မနည်းလှဘူး။
ဘယ်လိုဆက်စပ်မှန်းတော့ မသိပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်ကတည်းက စလို့ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးတဲ့အထိ ဝန်ကြီးချုပ် လီရှန်လွန်းဆီက မဲဆွယ်တဲ့ အီးမေး၊ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအီးမေးတွေ ဆက်တိုက်ဝင်နေတယ်။
ကိန်းဘရေ့ဂ်ျ ဘွဲ့ရကြီးဆိုတော့ စာရေးဟန်ကလည်း သိမ်မွေ့၊ ယဉ်ကျေး၊ သတ်ပုံတလွဲတွေ၊ အတိုက်အခံကို မိန်းမကောင်း ရန်တွေ့တွေ၊ ဝါကျကို ဖြတ်ချင်တဲ့နေရာက ဖြတ်တွေ မပါဘူးပေါ့ ဗျာတို့ရေ။
Labels: Politics, ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ်
ဟာကျူလီကတော့ သမ္မတကြီး ကသာရောက်လာအောင် လုပ်ပြီထင်တယ်
in ကာတွန်း, နိုင်ငံရေး ဂျုတ် - on 9/15/2015 - No comments
Labels: ကာတွန်း, နိုင်ငံရေး ဂျုတ်
in ဇင်ဝေသော်, လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင် (လီကွမ်ယု) - on 9/15/2015 - 1 comment
စာအုပ်ကို အကဲစမ်းတဲ့ အနေနဲ့ ပထမအကြိမ် တစ်ထောင်ပဲရိုက်တာ၊ လီနဲ့ဇင် တွဲထွက်လာတော့ တစ်ပတ်မပြည့်ခင် ပြတ်ထွက်သွားရော တဲ့။ ထပ်ရိုက်နေရပြီ။ အားပေးကြချက်တော့။ ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။
in သီဟနာဒ, ကျောင်းတွင်းမှတ်စု - on 9/15/2015 - No comments
ပျံလွန်တော်မူသွားတဲ့ သီဟိုဠ်ဆရာတော်ကြီးက ဝါတော်အကြီးဆုံးဆိုတော့ တခြားကျောင်းဘုန်းကြီးတွေကို ဆွမ်းစားပင့်တဲ့အခါ
"ဘယ်နေ့ တို့ကျောင်းမှာ ဘာ ပွဲရှိတယ်ဟေ့" ဆိုရုံနဲ့ သံဃာငယ်တွေက ဘာမှ မမေးရဲဘဲတက္ကစီငှားပြီး ကြွကြရတယ်။ ကျောင်းရောက်တော့ ကျောင်း က ဒကာတစ်ယောက်က တက္ကစီခပေးပေါ့၊ အပြန်လည်း အဲသလိုပဲ။
ဒါတော့ မဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီး ရှေ့က ကျောင်းထိုင်သွားတဲ့ ဆရာတော်တွေ ကို ပြင်ဖို့လျှောက်ကြည့်တယ်။ လုပ်မသွားကြဘူး။
"တနင်္ဂနွေနေ့၊ ပွဲရှိတဲ့နေ့တွေမှာ ကားရပ်စရာ နေရာမလောက်လို့ လမ်းဘေး မှာ ရပ်ခွင့်ပြုဖို့ အစိုးရဆီက ခွင့်တောင်းထားရတယ်။ ဒါတောင် ကိုယ်ပင့်တဲ့ ဆရာတော်တွေကို ကားနဲ့ အကြိုအပို့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ အဓိပ္ပါယ် လုံးဝ မရှိတော့ဘူး။ နောက်ပြီး အရင်ဆရာတော်ကြီးက ဝါအကြီးဆုံး၊ ငါက ကျောင်းထိုင်တွေထဲမှာ အငယ်ဆုံး၊ ကားအကြိုအပို့ လုပ်ကိုလုပ်မှ ရမယ်၊ Time to change" လို့ ပြောလိုက်တယ်။
အခုဆို ဆရာတော်အကြိုအပို့ကားတွေက သီးသန့်၊ ကားဆရာတွေ လည်း သီးသန့် အဖွဲ့လိုက်ပဲ။ ဘယ်သူက ဘယ်ကျောင်း၊ ကားနံပတ်က ဘာ။ ကားအရောင်က ဘာအရောင်၊ ဘယ်အချိန်ရောက်မယ်ဆိုတာ ကြို ဖုန်းဆက်။ အားလုံး ကွက်တိ။
in ကဗျာ, ဇင်ဝေသော် - on 9/15/2015 - No comments
သူမ ပေးတဲ့ ကတိကို
အနည်းဆုံး သူမ ဝန်ခံ ကတိပြုလိမ့်မယ်။
သူမဟာ Nothing to lose
သူမဆီမှာလည်း Nothing left.....။
ဒါပေမဲ့ ဓမ္မပဒ စတိုရီထဲကလို
ဆွမ်ခံကျွေးပါ့မယ် မယ်တော်ကြီး ဆိုတဲ့ရဟန်းတွေလည်း
မယ်တော်ကြီးစုကို ခိုင်းကြည့်ပါ။ ။
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ, မောနင်း ပို့စ် - on 9/15/2015 - No comments
အမေရိကန် လေယာဉ်လိုင်းလို လေယာဉ်မှားပြီး
လော့စ် အိန်ဂျလိကနေ ဟာဝိုင်ယီကို မလွှတ်လိုက်မိပါစေနဲ့
(တော်ပါသေးရဲ့၊ ဓမ္မဘေရီဆရာတ်ေကြီးနဲ့ ဓမ္မဂင်္ဂါတို့ ပါမသွားလို့)
Labels: ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ, မောနင်း ပို့စ်
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 9/14/2015 - No comments
ပေ့ဂ်ျအကြီစားတွေကလည်း ဘလော့မယ်၊ အန်မယ် ပဲ။
ပရိသတ်ကလည်း အန်မယ်၊ ဖော်လို ဖြုတ်မယ် ပဲ။ ပိုင်နက်ကိုယ်စီ ရှိကြတယ်။
ဖေ့စ်ဘုတ်က တကယ်ကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတာ။
မြန်မာပြည်ရဲ့ လက်ရှိအနေအထားတွေကြောင့် ကစ်ဆင်းဂျားစာအုပ်က ပိုရုပ်လုံးကြွလာတယ်
in ကစ်ဆင်းဂျား, ဇင်ဝေသော် - on 9/14/2015 - No comments
အာရပ်နွေဦးအပြီး ညီညွတ်မှုအားကောင်းဖို့ဆိုပြီး အမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့ အစ္စလာမ် စာအုပ်ကြီးဝါဒကို ရှေ့တန်းတင်ပစ်လိုက်တော့ အာရပ်နွေဦးရဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ မူလရည်ရွယ်ချက် ပျောက်သွားပြီး မွတ်စလင် ညီအကိုများ အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် မိုဟာမက် မော်စီက ၂၀၁၂ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သမ္မတဖြစ် သွားရော၊ သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက မွတ်စလင် ညီအကိုများအဖွဲ့ထက်တောင် ပိုပြီး အစွန်းရောက်ကြတယ်။
အဏာတည်မြဲရေးအတွက် အစိုးရက နည်းလမ်းရှာနေချိန် အထက်ပါ အဖွဲ့ အစည်းတွေက အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး၊ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားအရေးတွေ ကို အစ္စလာမ်ဘာသာတရားနဲ့ ဆုံးဖြတ်ဖို့ လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်လာကြတော့ နိုင်ငံမငြိမ်မသက်ဖြစ်လာပြီး စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတဲ့ အဆင့် ရောက်သွားရော။ လက်ရှိအခြေအနေက ဆိုးလွန်း၊ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်လွန်းတော့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတာကို ဒီမိုကရေစီကို တကယ်လိုလားတဲ့ လူအချို့ကတောင် သဘောတူလာရတယ်။
ဒီမှာ အမေရိကန်တွေဖက်က စဉ်းစားစရာတွေ....
အမေရိကန်အစိုးရက အဏာရှင်ကို တော်လှန်တိုင်း အားပေးနေရမှာလား?
တော်လှန်သူတွေကရော ဒီမိုကရေစီကို ဘယ်လောက် လေးစား လိုက်နာ သလဲ?
အမေရိကန်ရဲ့ အစဉ်အလာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဒီ နှစ်ခုကို မျက်ကွယ်ပြုတဲ့ အမေရိကန်သမ္မတဟာလည်း လူထုရဲ့ ထောက် ခံမှု မရနိုင်ဘူး။
ဒါနဲ့ အယောင်ဆောင် ပြောင်းလဲရေးကနေ အမေရိကန်က နောက်ဆုတ်။ အီဂျစ်လည်း လက်ရှိအနေအထား ရောက်သွားတော့တာပဲ။
in ဇင်ဝေသော်, ခေါင်းစားတတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားလုံးများ - on 9/14/2015 - No comments
ဒီမိုကရေစီက လစ်ဘရယ်ဝါဒကိုအခြေခံတော့ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီ ဖြစ် သွားရော။
ဒါက အထူးအဆန်းမှ မဟုတ်တာ၊ ပါဠိလို နိဗ္ဗာန်ရဲ့ ပရိယာယ် "ဝိမုတ္တိ" က လစ်ဘရေးရှင်းပဲ။
ဒါ့ကြောင့် ဆရာဂင်္ဂါတို့ဟောတတ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်မရခင် ဒီမိုကရေစီရအောင် အရင်လုပ်ကြဆိုတာ ပါဠိတော်နဲ့ ညီတယ်လို့ ဆိုရမယ်။
နောက်ပြီး ဗုဒ္ဓနဲ့ ပစ္စေကဗုဒ္ဓ ရှိသေးတယ်။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓက တစ်သီးပုဂ္ဂလကို ရည်ညွှန်းတယ်၊ သာဝကတွေ မထား၊ သာသနာ မထောင်ဘဲ တစ်ပါးတည်း နိဗ္ဗာန်ကြွတာမျိုး။ မြန်မာလို ဘုရားငယ်လို့လည်း သုံးကြတယ်၊ အင်္ဂလိပ် လိုတော့ ဆိုင်းလင့်တ် ဗုဒ္ဓ (Silent Buddha) လို့ အတွေ့များတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ပစ္စေကဗုဒ္ဓါကို တစ်သီးပုဂ္ဂလဘုရားလို့ မြန်မာမှုပြုရင် မမှားနိုင်ဘူး။
မေဂျာတော့ မဲနှိုက်ပြီး မရွေးရဘူး ထင်ပါတယ်
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 9/14/2015 - No comments
၁။ မြန်မာပြည်က တက္ကသိုလ်တက်မယ့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေအတွက် အားတက် စရာပါ။ မင်းတို့က တတ်တာ၊ မတတ်တာ အပထား၊ မေဂျာတော့ မဲနှိုက်ပြီး မရွေးရဘူး ထင်ပါတယ်။ ကွန်ဖျူးရှပ်ကြီးတို့နိုင်ငံက မဲချပြီး ဆော်ထည့်လိုက် သတဲ့။ ကျချင်ရာ ကျစေလဟယ်။
၂။ ဒါက သတင်းနဲ့တော့ တိုက်ရိုက်မဆိုင်ဘူး၊ သတိရလို့ပါ။ အမေရိကန် အိုင်တီ ဂုရုကြီးတစ်ယောက် တရုတ်ပြည် ဘေဂျင်းတက္ကသိုလ် ထဲမှာ နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဟောပြောနေရင်း
"နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ တရုတ်ပြည်က ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် တရားမဝင် ခိုးယူထားတာ" မှတ်ချက်ပေးတော့ တရုတ်ပါမောက္ခတွေ၊ ဆရာတွေက တခွိခွိနဲ့ ရယ်ကြသတဲ့။
ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက် ရယ်နေကြတာလဲမေးတော့မှ "၆၅ ရာခိုင်နှုန်းပဲလား၊ မကလောက်ပါဘူး။ ၉၀ ကျော်ရမှာပါ" လို့ ဆရာတစ်ယောက်က ဖြေသတဲ့။
in Politics, ပြန်လည်မျှဝေခြင်း - on 9/14/2015 - No comments
Tin Maung Win with YU Geol Ninetyfive and 10 others
RED RIBBON CAMPAIGN FOR GEOSCIENTIST
မြန်မာ့ ရေ နံ လုပ်ငန်း စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာ န သို့ဒုသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်း ရဲ့ PA ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ထက်လျှန်ဖြိုး ( DSA 38 ရေတပ်) အား ပြောင်းရွှေ့ ခန့်အပ်လိုက်ကြောင်း သတင်းသိရပါ တယ်.နောက်ထပ် ဘယ်နှစ်ရောက် လာအုံးမလဲမသိဘူး
အင်္ဂလိပ် ပိုင်BOC,MOC,MOGE မှသည် ယနေ့ မြန်မာ့ရေနံလုပ်ငန်း တိုင် အောင် ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင် ဘူမိဗေဒ/ ရေနံအင်ဂျင်နီယာ များသာ ဦးစီးဦးဆောင် ပြု ခဲ့တာပါ
အခု ဒုသမ္မတက သူ့ PA ကို ဒုသမ္မတရာထူးမပြုတ်ခင်လွဲပြောင်းတာပါဘဲ
ရေ နံမြေ အထွေထွေ မန်နေဂျာ ၁၁ ယောက် မှာ လက်ရှိ စစ် ဗိုလ် လူထွက် ၅ ယောက် နေ ရာ ယူထားပါတယ်
ကဲ MGS ဦးဆောင်ပြီး.... လူမူရေးအပြင် . ပညာရပ် တိုး တက် ရေး ... ပညာရပ် ဆိုင်ရာ ရာထူးများအနိုင် ကျင့် လုယူရေး ကိစ္စ black ribbon campaign စ လိုက်ကြရ အောင်
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 9/13/2015 - No comments
သူတို့ ကွန်စတီကျူးရှင်းက ဒေါ်စုလိုပုဂ္ဂိုလ်ကို သမ္မတဖြစ်ခွင့် တားတယ်။
သူတို့ရွေးကော်စည်းမျဉ်းက ဇင်ဝေသော်လို ပေမှီဒေါက်မှီတစ်ယောက်ကို လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ခွင့် တားတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ၁၀နှစ် ဆက်တိုက် နေရမတဲ့။
ဇင်ဝေသော်ဆို အင်္ဂလိပ်လို ပတ်ဘလစ် စပိကင်း ပြောရမယ်ဆို မြန်မာပြည်မှာ ဒေါ်စုကလွဲရင် ဘယ်သူ့မှ သိပ်ဂရုစိုက်စရာ မလိုဘူး။
တက္ကသိုလ် ကွန်ဖရင့်တွေ လိုက်ပြောနေသူမို့ အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံလည်း မျက်နှာငယ်စရာ မလိုတော့ဘူး။
နောက်တာ၊ အတည်လည်း ဒါပဲ။
အတိုက်အခံပါတီကို မဲအနိုင်ရအောင် အကူအညီပေးတဲ့ အစိုးရရယ်လို့
in သူတို့စကား - on 9/13/2015 - No comments
အတိုက်အခံပါတီကို မဲအနိုင်ရအောင် အကူအညီပေးတဲ့ အစိုးရရယ်လို့ ကြားကော ကြားဖူးလို့လားကွာ။ (လီကွမ်းယု)
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 9/13/2015 - No comments
စနေနေ့ ကသပ ဗောဇ္ဈင်၊ မောဂ္ဂလာန ဗောဇ္ဈင်၊ စုန္ဒ ဗောဇ္ဈင်သုတ်တွေ ရွတ်ကြတိုင်း အထူးသဖြင့် ဒေါ်စု၊ ဦးသိန်းစိန်တို့ ကျန်းမာရေး ဒေါဒေါင်မြည်နေဖို့ ဆုတောင်းပါသဗျာ။ ဦးသိန်းစိန်ကမှ စက်ကူနေရသေး၊ ဒေါ်စုကျန်းမာရေးက အံ့ဩလောက်အောင် ဒေါင်ဒေါမြည်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင်အတွက် လူတစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချက်
in ဇင်ဝေသော်, လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင် (လီကွမ်ယု) - on 9/13/2015 - No comments
အခန်းတိုင်းမှာ ရောင်စုံဓာတ်ပုံတွေ ထည့်ထားတဲ့အတွက် စာအုပ်ဈေးကြီးသွားရတယ်လို့ ဆရာကိုကျော်စွာဝင်းက အသိပေးလာပါတယ်။ လီရဲ့ ဒုတိယစာအုပ်က ရောင်းဈေး ၅၀၀၀ိ ပါတဲ့။ ကိုယ်တိုင် စာအုပ်ကို မမြင်ရသေးပါ။ ဈေးကတော့ မှန်းတာထက် ပိုသွားပါတယ်။ မျှပြီး ဖတ်ကြပေါ့။ စာအုပ်ကရတဲ့ စာမူခကိုတော့ တစ်နေရာမဟုတ် တစ်နေရာ ပြန်လှူမှာပါ။ ကုသိုလ်လို့သာ သဘောထားကြပေတော့ လို့။
Pyae Sone Malun ။ ။ အရှင်ဘုရား ဒီမှာဘယ်တော့လောက်ရနိုင်မလဲ ဘုရား.
စင်္ကာပူက စာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီလ၊ တနင်္ဂနွေ တစ်ရက်ရက် အချိ်န်သတ်မှတ်ပြီး ကျောင်းမှာ အမှတ်တရ လက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ စီစဉ်ကြည့်ပါမယ်။ စိတ်ဝင်စားသူ၊ လာနိုင်သူ လာနိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ လက်ထဲ စာအုပ် မရောက်လာသေးပါ။
Than Htut။ ။ မြန်မာပြည်မှာ စာအုပ်တွေက ဖြစ်သင့်တာထက် ဈေးပိုနေတယ်လို့ ဆိုသူတွေက ဆိုကြတယ်။
ကျနော်ကတော့ စာအုပ်ဝယ်လို့ကုန်တဲ့ပိုက်ဆံ မနှမြောပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါက investmentဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့နိုင်ငံအတွက် အသ်ိပညာဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေ အမြောက်အမြားလိုအပ်နေပါသေးတယ်။
Zin Wai Thaw။ ။ ဒါတောင် စထရိတ်တိုင်းအတွက် ပေးရတဲ့စရံငွေကို ဒေါက်တာလီက စပွန်ဆာခံလို့။ အရင်စာအုပ်တုံးက အိပ်စိုက်ပါ။
ဥပဒေအထက် ဘယ်သူမှ မရှိ
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 9/13/2015 - No comments
လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က လက်ပံတန်း ကျောင်းသားအရေးအခင်းမှာ ကျောင်းသားတွေ ကို ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ ရဲတွေကို အရေးယူပေးဖို့ အစိုးရထံ တောင်းဆိုထားပါသတဲ့။ ရဲကားကို ခဲနဲ့ထုတဲ့ ကျောင်းသားတွေကိုလည်း အရေးယူပေးသင့်တယ်လို့ ဒီအဖွဲ့က ဆိုပါသတဲ့။ မျှတတယ်ပေါ့။ ဥပဒေအထက် ဘယ်သူမှ မရှိ။
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 9/12/2015 - No comments
စစ်ကိုင်းတိုင်း အထက်ပိုင်း၊ ခန္တီးခရိုင်၊ လေရှီးမြို့နယ် (နာဂတောင်တန်း) က အဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ် ရှိရင် (သို့) သိရင် ပြောပေးကြပါလား။
ဒေါ်ဝင့်ဝါထွန်း (သို့) ဦးအောင်မင်းကို စိန်ခေါ်သူ
ဒေါ်ဝင့်ဝါထွန်း (သို့) ဦးအောင်မင်းကို စိန်ခေါ်သူရဲ့ ဘဝဖြစ်စဉ်အကျဉ်း၊ အကျယ်ကို သိလိုပါတယ်ခင်ဗျား။ သိသူရှိရင် မျှဝေပေးစေချင်ပါတယ်။ ဒုန်း၊ ဒုန်း၊ ဒုန်း။
ကမ်းလက် shared Ven Awthada's photo.
ဂိုးအွန်၊ ဂက်(တ်) ဝန်၊ ကယ်ရီ အွန် ( go on, get on and carry on) ဒေါ်ဝင့်ဝါထွန်း။
ယူ ဂက်တ် မိုင် ဆိုက်ကော်လော်ဂျီကယ် ဘုတ်။
ကဲ ဒုန်းလိုက်ကြပါဦး ပရိသတ်တို့ဗျား..။
ကယားပြည်နယ်၊ ရှားတောမြို့နယ်မှာ ဦးအောင်မင်းနဲ့ ပြိုင်မယ့် NLD က ကယန်းတိုင်းရင်းသူ ဒေါ်ဝင့်ဝါထွန်းပါတဲ့..။
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 9/12/2015 - No comments
ဦးသိန်းစိန်ကို ထောက်ခံတယ်ပြောတိုင်း ဒေါ်စုထောက်ခံသူတွေက ငါ့ကို မသရော်ကြ၊ မကလော်ကြပါ။ ငါနှင့်ငါ့သမိုင်းသည် အစစ်ဆေးခံနိုင်ပါ၏။
စောစောကပို့စ်ကို စောင့်ကြည့်ပါ။ ငါသည် ပေ့ဂ်ျမှာရော အကောင့်မှာပါ တင်ခဲ့ပါသည်။
ငါသည် လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲခွင့်ထက် ယဉ်ကျေးစွာ ကွဲလွဲခွင့်ကို မျှော်လင့် ပါသည်။
in ဇင်ဝေသော်, ဘောလုံး - on 9/12/2015 - No comments
သံယောဇဉ်ကြီးစွာ အားပေးခဲ့ရတဲ့ မန်ယူ။
ယုံကြည်မှုကြီးစွာ အားကိုးခဲ့တဲ့ ဦးသိန်းစိန်။
မန်ယူက နှစ်နာရီအတွင်းအဖြေ၊ ဦးသိန်းစိန်က နှစ်လတွင်းအဖြေ။
ပါမောက္ခ မဲလ်ဘန်းနဲ့တွေ့တော့ ဦးလှဆွေကြီးကို သတိရတယ်
ပါမောက္ခ မဲလ်ဘန်းနဲ့တွေ့တော့ ဦးလှဆွေကြီးကို သတိရတယ်။
ပြောဖူးပါတယ်၊ အမေရိကန်မကြီး၊ ဘုန်းကြီးနဲ့ မြန်မာလို စကားပြောရာ မှာ ဝေါဟာရအသုံးအစွဲ လုံးဝမမှားတဲ့ ပါမောက္ခကြီး။
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကို မြန်မာလိုခေါ်ရာမှာ မူရင်းနဲ့ ဆက်စပ်မရတာတွေ အကြောင်း ပြောကြတယ်။ ဥပမာ၊ ချိုင်းနားက တရုတ်ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့။
စကားဝိုင်းထဲရှိ ကိုလျှာရှည်မြန်မာက ဘာမှမသိဘဲ ဖေ့စ်ဘုတ် ကွန်မင့်ရေးသလို "ဖရန့်စ်က ပြင်သစ်" လို့လုပ်ပါလေရော။
ဒီတော့ မဲလ်ဘန်းက "ဒါက ဆက်စပ်တယ်လေ၊ ဖရန်စစ်ကနေ ပြင်သစ်၊ ရခိုင်အခေါ်အဝေါ်နဲ့ဆို ပိုတောင်နီးစပ်သေးတယ်" လုပ်ပါလေရော။
ရှက်လိုက်တာ ပြောမေဘာနဲ့ဒေါ့ ဗျာတို့ရေ။ မဲလ်ဘန်းနဲ့ စကားပြောရင်း မဆီမဆိုင် ဦးလှဆွေကြီးကို ဒိရတာ ကျော့ အပြစ် မှုတ်ပါဘုနော့။
ဒါနဲ့ မသိလို့ မေးရဦးမယ်။ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ဆိုတဲ့အထဲမှာ ဘာသာက ကိုးကွယ်မှုဘာသာ (ရီလေးဂျင်း) သက်သက်ပဲလား၊ ဘာသာစကား (လန်းဂွေ့ဂ်ျ) ရော မပါဘူးလား။ ဘာသာစကားလည်း ပါသင့်တယ်။
ဝန်ကြီးရဲ့ဝေါပေါ်မှာ မြန်မာစာခမျာ အတော်လေး အထိနာနေပြီနော်။
in ပြုံးစိစိ, သီဟနာဒ, ကျောင်းတွင်းမှတ်စု - on 9/12/2015 - No comments
ကျေင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ အဝှားကို ဘယ်ပါတီမဲပေးခဲ့သလဲမေးတော့ သူမက ဘေးဘီကို အရင်ကြည့်တယ်။ မပြောဘူး။
"ပြောတာက ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊ ငါ့ကိုလိမ်ပြောရင် မုသာဝါဒ နော်၊ ငရဲကြီးမှာ" လို့ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ဖိန့်လိုက်တော့ တိုးတိုးလေး "W.P" တဲ့။ မြန်မာတွေ အများစုကလည်း ဘုန်းကြီးကဖိန့်လိုက်ရင် ပါသွားတတ်တယ်။ တချို့က အဖိန့်ကောင်းလှတယ်။
Labels: ပြုံးစိစိ, သီဟနာဒ, ကျောင်းတွင်းမှတ်စု
*၉၂ ပါတီ စာရင်းပေးပေမဲ့ USDP ပါတီနဲ့ NLD ကသာ တစ်နိုင်ငံလုံး ခြုံငုံမိ
in Politics, ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 9/12/2015 - No comments
*၉၂ ပါတီ စာရင်းပေးပေမဲ့ USDP ပါတီနဲ့ NLD ကသာ တစ်နိုင်ငံလုံး ခြုံငုံမိ။
USDP ပါတီက changing လို့ပြောချိန့်  NLD က real change လို့ ပြော။
*NLD က ကွန်စတီကျူးရှင်း ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အထိ ပါလီမန်ထဲမှာ လွှတ်တော် အမတ်နေရာ ရရှိဖို့ ကြိုးစား။
*ယခု ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ အာဏာအလွှဲအပြောင်းဖြစ်စေဖို့ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များနဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များအပေါ် မူတည်။
*နိုင်ငံခြားရင်းနှံမြှုတ်နှံလိုသူတွေက လက်ရှိရင်းနှီးနေတဲ့ ဦးသိန်းစိန် ဒုတိယသက်တန်းအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေမှာကိုပဲ လိုလားလောက်ဟု ခန့်မှန်းကြ။
ဟဲဟဲ ဒါလောက်ဆို ရပြီ
in ဇင်ဝေသော်, နိုင်ငံရေး ဂျုတ် - on 9/11/2015 - No comments
ကျနော်ဟာ လက်ရှိကုမ္ပဏီမှာ စီအီးအို၊ ကမ္ဘာသိ တက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ ဌာနတစ်ခုမှာ အကြံပေးပါ။ ဘယ်ကိုမှ ပြန်လည် မလှူဒါန်း၊ မပေးကမ်းဘူးဆိုရင် ကျနော့်ဝင်ငွေဟာ တစ်လ မြန်မာငွေ သိန်း ၄၀ ကျော်ပါတယ်။ ဒါတောင် ကျနော့်ရဲ့ ဘက်ဆဲလားစာမူခ ထည့်မတွက်ရသေးပါ။
ပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက် အခုလို အလုပ်လုပ်နေခြင်းပါ၊ ယုံကြည်ရင် ကျနော့်ကို မဲပေးပါ။ နောင်တ မရစေရပါ။
စင်္ကာပူမဲဆန္ဒနယ်မြေ လွှတ်တော်အမတ်လောင်း ကိုယ်စားလှယ်။
ဟဲဟဲ ဒါလောက်ဆို ရပြီ။
"ဒါက ကွန်ဖီဒင်ရှယ်၊ သူများကို မပြောရဘူး" တဲ့
in သီဟနာဒ, ကျောင်းတွင်းမှတ်စု - on 9/11/2015 - No comments
ဒီနေ့ညနေ ကျောင်းရောက်လာသမျှ စလုံး ဒကာ၊ ဒကာမတိုင်းကို ဘယ်ပါတီ မဲပေးခဲ့သလဲလို့ မေးတော့ လူတိုင်း
"ဒါက ကွန်ဖီဒင်ရှယ်၊ သူများကို မပြောရဘူး" တဲ့။ တကယ်လည်း မပြောကြဘူး၊ ရီနေကြတယ်။
"ဟင် တို့များ မဲလည်း မပေးရဘဲနဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်ကနေတောင် ပြောချ လိုက်သေးတယ်" လို့ စဉ်းစားရင်း ပြုံးမိသေး။ မတတ်နိုင်ဘူး၊ ဒီနေ့ ပို့စ်များသွားပြီ။
နည်းနည်းလေးတော့ လွဲနေတယ် ဦးဌေးဦး
in ဇင်ဝေသော်, လူကြီးမင်းများသို့ - on 9/11/2015 - No comments
ပို့စ်အဟောင်းပါဗျာ၊ ကြာပါပြီ။ အခုမှ ပြန်ပြီး ဖတ်နေ၊ ရှယ်နေကြလို့ ပြန်တင်ပေး
၁။ လူကြီးမင်းစကားအရ"ဒီမိုကရေစီဆိုရင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောကျလို့ ရောင်း တာဝယ်တာကို ဝင်တားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်" တဲ့။
၂။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ကက်ပီတယ်လစ်ဇင်ကို တူသလိုလို မလုပ်ပါနဲ့ ဦးဌေးဦး။
၃။ အစိုးရရဲ့ ဝေဝါးဝါးပေါ်လစီကို လူထုက သဘောမတူခွင့် ရှိပါတယ်။
"ဒီမိုကရေစီဆိုရင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောကျလို့ ရောင်းတာဝယ်တာကို ဝင်တား ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်" ဒီမိုကရေစီဆိုတိုင်း နိုင်ငံခြားသားစိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူလို့ မရပါဘူး။ ဝယ်လို့ "ရ မရ" က အိုပင်းမားကက်နဲ့ပဲဆိုင်ပြီး ဒီမိုကရေစီနဲ့ လုံးဝမဆိုင်ပါဘူး ဦးဌေးဦး။ အိုပင်းဆိုတဲ့အောက်မှာတောင် ဘယ်လောက် အိုပင်းသလဲဆိုတာတွေ အများကြီး ကျန်နေပါသေးတယ်။ ထားပါတော့။
ဒီနေ့ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေက ဒီမိုကရေစီနဲ့ ကက်ပီတယ်လစ်ဇင် တို့ ဂလိုဘယ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် ခွဲခြားပြီး ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ လီကွမ်းယုအဆိုအရ ကက်ပီတယ်လစ်ဇင်က ဂလိုဘယ်ဖြစ်နိုင်ပြီး ဒီမိုကရေစီကတော့ ဂလိုဘယ် မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ကောက်ချက်ချပါတယ်။ ဒါဆို ဒီနှစ်ခု မတူဘူဆိုတာ ဦးဌေးဦး သဘောပေါက်လောက်ပါပြီ။
၁။ တရုတ်။ ကက်ပီတယ်လစ်ဇင် ရာနှုန်းမပြည့် တပြည့်၊ ဒီမိုကရေစီ လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ (စီးပွားရေးပြောင်း နိုင်ငံရေး မပြောင်း)
၂။ အိန္ဒိယ၊ ဒီမိုကရေစီရာနှုန်းပြည့်၊ ကက်ပီတယ်လစ်ဇင်ရာနှုန်း တစ်ဝက်တောင် မပြည့်ဘူး။ (အမျိုးသားရေး ဝါဒကြောင့်)
၃။ စင်္ကာပူ၊ အကန့်အသတ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီ၊ ကက်ပီတယ်လစ်ဇင် ရာနှုန်းအပြည့်။ (ပြည်သူက ကန့်ကွက်ခွင်တော့ရှိတယ်၊ သူတို့အသံကိုနားထောင်ပြီး အစိုးရက တချို့ကို ဟန်ချက်ပြန်ညှိတယ်)
၄။ အနောက်၊ ဒီမိုကရေစီရာနှုန်းပြည့်၊ ကက်ပီတယ်လစ်ဇင် ရာနှုန်းပြည့်။ (ပေါ်လစီတွေ ကွဲနေသေးတယ်၊ ဝဲလ်ဖဲယား စတိတ် ဟုတ်၊ မဟုတ်။ ဥရောပက ၊ ဝဲလ်ဖဲယား စတိတ်။ အမေရိကားက ၊ ဝဲလ်ဖဲယား စတိတ် မဟုတ်ဘူး။ ဝဲလ်ဖဲယား စတိတ် ဟုတ်၊ မဟုတ်က ကက်ပီတယ်ဇစ်ဇင်ရဲ့ တိုးအား အနည်းအများကို ဖြစ် ပွားစေတယ်။ ဝဲလ်ဖဲယား စတိတ်မဟုတ်တဲ့ အမေရိကရဲ့ ကက်ပီတယ်လစ်ဇင်က တိုးအားပိုကောင်းသွားတယ်။ ဒီအတွက် ပြန်ပေးလိုက်ရတာက လူမှုရေး ပြသနာ အချို့ )
၁။ ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတိုင်း ကက်ပီတယ်လစ်ဇင်ရာနှုန်းပြည့်စရာမလိုဘူး။
၂။ ကက်ပီတယ်လစ်ဇင် ကျင့်သုံးတိုင်း ဒီမိုကရေစီပြောလို့ မရဘူး။
သိပ်ပြီး စာဖတ်ခွင့်မရှိသေးတဲ့ လူထုကို မတူညီတဲ့(နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေး တစ်ခြား စီပါ)ပေါ်လစီနှစ်ခုရောထွေးပြီး ရှုပ်သွားအောင် ခပ်တည်တည်မဖိန့်ပါနဲ့။ ကိုယ်တိုင်မသိလို့ဆိုရင်လည်း မသိသလို နေလိုက်ပါလားဗျာ။ အမြင်မတော်လည်း ဖြစ်မနေပါနဲ့။
ဦးဌေးဦး တကယ်လုပ်ရမှာက ဂလိုဘယ် ပေါ်လစ်တစ်နဲ့ ဂလိုဘယ် ကက်ပီတယ်လစ်ဇင်ကို ပိုပြီးကျေညက်အောင် ဖတ်ရှုလေ့လာရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့် စတေးတပ်က ပေါ်လစီရဲ့ အဆိုးအကောင်းကို ဝေဖန်တာမဟုတ်ဘဲ ဝါးတားတား ဦးဌေးဦးစကားကို ထောက်ပြရုံပါ။
လေ့လာပါအုံး ဦးဌေးဦး။ တက်လမ်းရှိပါတယ်။
"လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင်" စာအုပ်နဲ့ ကြိုဆိုလိုက် ပါသည်
in ကမ်းလက်စာပေ, ဇင်ဝေသော်, လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင် (လီကွမ်ယု) - on 9/11/2015 - No comments
ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ရွေးကောက်ပွဲ စည်းရုံးရေးရာသီကို ဇင်ဝေသော် ဘာသာပြန် သည့် လီကွမ်းယု၏ "လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင်" စာအုပ်နဲ့ ကြိုဆိုလိုက် ပါသည်။
ဖြန့်ဖြန့်ချင်း ရန်ကုန်၊ မန္တလေးစသော မြို့ကြီးများမှ အော်ဒါများ အဆက်မပြတ် ဝင်နေသည်ဟု ကြားသိရသဖြင့် စာဖတ်ပရိသတ်ကို ကျေးဇူးတင်ရ၊ ကိုယ်တိုင် လည်း ဝမ်းသာရ ဖြစ်ရပါသည်။
မြန်မာပြည်မှာ စီးတီးမတ်များအပါအဝင် စာအုပ်ဆိုင်ကြီးတိုင်းမှာ ရနေပါပြီ။ စင်္ကာပူမှာတော့ ဒီလ၊ ရက် ၂၀ ကျော်မှ ရနိုင်မယ်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ် ပါသည်။
Labels: ကမ်းလက်စာပေ, ဇင်ဝေသော်, လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင် (လီကွမ်ယု)
သမ္မတကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါ၊ အဖွဲ့ချုပ်ကို မဲပေးပါ
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 9/11/2015 - No comments
စင်္ကာပူမဲဆန္ဒနယ်မြေ လွှတ်တော်အမတ်လောင်း ကိုယ်စားလှယ်
အမည်။ ။ ဇင်ဝေသော်
အသက်။ ။ ၄၅ နှစ်
မဲရစ်တယ် စတေးတပ်။ ။ လူပျိုကြီး၊ (မလို၊ မဖြစ်မနေ ဖြည့်ရမယ်ဆိုလို့ ဖြည့်သည်)
ပညာအရည်အချင်း။ ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းထွက် (ထူးရှယ်)
အလုပ်အကိုင်။ ။ ကျောင်းထိုင်၊ စာရေး၊( လျှော့မတွက်နဲ့၊ သူ့စာအုပ်တွေ လူဖတ်များ)
အရွေးခံမည့်ပါတီ။ ။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ဆောင်ပုဒ်။ သမ္မတကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါ၊ အဖွဲ့ချုပ်ကို မဲပေးပါ။
ဖတ်ရတာ အားရှိစရာ။ ဝက်ဝက်ကွဲ ဆိုလား
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 9/11/2015 - No comments
ဒေါ်စုကတော့ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ လူယုံတော်၊ ဦးစိုးသိန်းနယ်မြေ၊ ကယားပြည်နယ်ကနေ စဖြိုနေပြီဆိုပဲ။
အနောက် မီဒီယာကလည်း ခပ်ကြွကြွလေး ရေးထားတော့ ဖတ်ရတာ အားရှိစရာ။ ဝက်ဝက်ကွဲ ဆိုလား။
လယ်သမားကြီးတစ်ယောက်က သူ့တွေ့ချင်လို့ လယ်ထဲက အလုပ် ပစ်ထားခဲ့သတဲ့။
ပတ်ဘလစ် စပီကင်းမှာတော့ ဒေါ်စုကိုမှီတဲ့ နိုင်ငံရေးသမား ပြည်တွင်းမှာ မရှိသလောက် (မရှိသလောက်ဆိုတာက အားနာလို့ ထည့်တာ) ရှားပါတယ်။
တောသားအတွေး တွေးတော့ ဒေါ်စုတို့ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ ရှိသမျှ အကုန်ပေးပြီး လုပ်တာ၊ ယူပြီးလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။
တိုင်းရင်းသား၊ တောသူတောင်သားတွေကလည်း သူ့တွေ့ရင် ချစ်သွားကြမှာပါ။
ပခုက္ကူသွားပြီး ဟိုကောင်မလေးကိုလည်း အားပေးလိုက်ပါအုံး၊ အားငယ်နေလိမ့်မယ်။
in စာဖတ်သူသို့ပြန်စာ, ဇင်ဝေသော် - on 9/10/2015 - No comments
ကမ်းလက် (ဇင်ဝေသော်)က ကြားနေဝါဒလား၊ ဘယ်ပါတီကို ထောက်ခံသလဲ တဲ့။ မေးနေကြတာ ကြာပါပြီ။ အခုတလော ပိုမေးကြတယ်။
ကကြိုးလေးထွေနဲ့ အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘာသာပြန်ခဲ့သလို နှီးဖျာတစ်ချပ်ရဲ့ ဗီတာမင် ရေကြည်တစ်ပေါက် (ဦးသိန်းစိန်အကြောင်း) ကိုလည်း ဘာသာပြန် ခဲ့တာပဲ ဆိုတော့ မေးချင်စရာပေါ့။
သာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ကို ထောက်ခံအားပေးပါတယ်။ မဲပေးခွင့်သာရှိရင် ကိုယ့်မဲက အဖွဲ့ချုပ်အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမဲ့ စာရေးသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ (ကိုယ်တိုင်က ဘာမှ မဟုတ်ပေမဲ့) ကိုယ်တင်တဲ့ သတင်း၊ ကိုယ့်ကောက်ချက်က အတတ်နိုင်ဆုံး တရားမျှတနေဖို့ အမြဲကြိုးစားပါတယ်။
စထရိတ်တိုင်းမ်မှာ ဒေါ်စုပုံ ပါလာရင် တင်သလို ဦးသိန်းစိန်ပုံပါလာလို့ ချန်ထားတာမျိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကြိုးစားထိန်းမတ်ရင်း လွတ်ထွက်သွားတာမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒေါ်စုအပေါ် အထင်ကြီးလေးစားစိတ် အများအပြားရှိသလို ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ ကောင်းကွက် တချို့ကိုလည်း မြင်မိအောင် ကြည့်ပါတယ်။
နောက်နေ့တွေမှာ မြင်မိတာလေးတွေ ရေးပါအုံးမယ်။ ယဉ်ကျေးစွာ ကွဲလွဲနိုင်ကြပါတယ်။
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 9/10/2015 - No comments
"အနောက်ရဲ့ တန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ အင်ဒီဗီကျူ ယယ်လစ်ဇင်ကို ဝေဖန်ပုတ်ခတ်နေသူတွေက အနောက်စနစ်တွေရဲ့ ထွက်ကုန် နည်းပညာအကူအညီတွေကို သုံးစွဲပြီး သူတို့ဝါဒပြန့်အောင် ဖြန့်နေကြတယ်" ဆိုတဲ့အဆိုကို ငြင်းဖို့တော့ တော်တော်ခက်တာပဲ။ အင်ဒီဗီကျူယယ်လစ်ဇင်ကို အသေအလဲ ပုတ်ခတ်နေသူက လက်ထဲမှာတော့ အနည်းဆုံး ဟွာဝေးနဲ့။
ပြောင်းလဲလာတဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက်သံများ ၂
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 9/10/2015 - No comments
"ကစ္စိ ဘန္တေ ခမနီယံ၊ ကစ္စိ ယာပနိယံ" (ကျန်းမာ၊ မျှတပါစဘုရား)
၂။ ဖေ့စ်ဘုတ် မတိုင်မီခေတ်
"အရှင်ဘုရား ကျန်းမာပါရဲ့လား၊ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါရဲ့လား ဘုရား"
"မတွေ့တာ ကြာပြီနော်ဖျာ့၊ ဟိုနေ့ကတောင် အရှင်ဖျား ပို့စ်ကို တပည့်တော် လိုက်ခ်လိုက် ရှယ်လိုက်သေးတယ် ဖျာ့"
မနက်ပိုင်း နိုင်ငံရေး ဒိုင်ယာလော့ဂ်
in Politics, ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 9/10/2015 - No comments
"မဲမပေးမနေရ ဥပဒေ ထုတ်ပြန်ထားရင် မဲပေးကြဖို့ လိုက်ပြောနေစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့"
"လူထုအများစုက ထောက်ခံတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ အစိုးရလက်ထက်မှာမှ ဒါမျိုးဥပဒေမျိုးက ရှိလာနိုင်မှာ။ လူထု မထောက်ခံတဲ့ အစိုးရက ဒီဥပဒေမျိုး ဘယ်ထုတ်မလဲ၊ ကိုယ့်သေတွင်းကို တူးသလိုဖြစ်မှာပေါ့"
ဒါက နိုင်ငံရေးကစားကွက်ပဲ၊ လှပါတယ်
ဦးသိန်းစိန်ကလည်း ရွေးကောက်ပွဲအမှီ ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ် လက်မှတ်ထိုးနိုင် ဖို့ အသည်းအသန် တဲ့။
ဒေါ်စုကလည်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲတွေကို မလောကြဖို့၊ ရေ ရှည်ခံမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ဖို့သာ အရေးကြီးကြောင်း လှမ်းပြောထားသတဲ့။ (သတင်းစာ အာဘော်)
ဒါက နိုင်ငံရေးကစားကွက်ပဲ၊ လှပါတယ်။
မကြာမကြာ ခလုပ်ဝင်ဝင်တိုက်တယ် မထင်ကြပါနဲ့၊ အမျိုးစောင့်ဥပဒေက လည်း ဘာသာရေးကကြည့်တော့ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေးက ကြည့်တော့ နိုင်ငံရေးပါ။
အခု တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါတီခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက် ကစားနေပုံကို သဘောကျတယ်။
ဘယ်နိုင်ငံသားက ပြည်တွင်းစစ်ကို လိုချင်မလဲ။
ဘယ်နိုင်ငံသားက လူမျိုးခြားက သူ့လူမျိုးအပေါ် အနိုင်ကျင့်တာ မြင်ချင်မလဲ။
မြင်းခြံလောက်တော့ ရမှာပါ :)
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 9/09/2015 - No comments
အရပ်က ၅ ပေ၊ ၁၁ လက်မ၊ လက်ရှိ ဥပဓိ၊ လက်ရှိ ပညာရေးနဲ့ လုပ်ဆောင် ချက်၊ လူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်၊ အဖွဲ့ချုပ်ထဲလည်းဝင်၊ မြန်မာပြည်ထဲမှာလည်း ၁၀ နှစ် ဆက်တိုက်နေခဲ့မိရင် မြင်းခြံလောက်တော့ ရမှာပါ။
လူထုနဲ့ အတိုက်အခံ မဖြစ်ချင်လို့ ပခုက္ကူကို လက်ရှောင်လိုက်တယ်။ ဓာတ်ပုံထဲက ကျန်တဲ့ နှစ်ယောက်ကိုတော့ (ဆရာသစ္စာနီနဲ့ ဓမ္မဂင်္ဂါ) ငုံ့ကြည့်ပြိုက်မယ်၊ ဟွင်းဟွင်း။
(ဗိုလ်ချုပ် အနှစ်တစ်ရာ အမှတ်တရ၊ ဇင်ဝေသော်၊ သစ္စာနီ၊ ဓမ္မဂင်္ဂါ နဲ့ သစ္စာနီပရိသတ်)
လူဆန်စွာ၊ သိက္ခာရှိစွာ ယှဉ်ပြိုင်ကြရင်း
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 9/09/2015 - No comments
အရင်ကလည်းပြောခဲ့တယ်၊ အခုလည်း ပြောပါတယ်။
လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုသာ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ အောင်အောင်မြင်မြင် ကျင်းပပေးသွားနိုင်ရင် ဦးသိန်းစိန်ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကူးအပြောင်းအတွက် သူ့သမိုင်းလည်း အထင်ကရ ကျန်နေမှာဖြစ်ကြောင်းပါ။
လူဆန်စွာ၊ သိက္ခာရှိစွာ ယှဉ်ပြိုင်ကြရင်း သူတစ်ပါးကို ပုတ်ခတ်စွပ်စွဲခြင်းထက် မိမိတို့ အနာဂတ်အစီအမံတွေနဲ့ လူထုမဲကို ရအောင်ယူနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း ရွေးကောက်ပွဲ စည်းရုံးရေးကာလကို ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဆရာကြီး နေရူးတို့ စသုံးခဲ့တဲ့စကားပါ။ တို့က ပါဝါနိုင်ငံရေး မလုပ်၊ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးပဲ လုပ်တယ် တဲ့။
အခု မြန်မာပြည်မှာ ခေတ်စားနေတာ ပါတီနိုင်ငံရေး မလုပ်၊ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးပဲ လုပ်တယ်၊ ဘယ်ပါတီဘက်သားမှ မဟုတ်ဘူး ပေါ့။
ပါတီတို့၊ အော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းတို့ ဆိုဆိုက်တီးတို့က တကယ်တော့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကို နေရာအလိုက် ခွဲပြီးခေါ်တာပါ။ နိုင်ငံရေးမှာတော့ ပါတီပေါ့လေ။
ဒါ့ကြောင့် နိုင်ငံရေးဆိုတာနဲ့ ပါတီက ကင်းလို့မရပါဘူး။ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး စတဲ့နယ်ပယ်မှာတော့ ပါတီမရှိဘူးပေါ့။
ဒါတောင် သွယ်ဝိုက်ပြီး ရှိနေတတ်ပါတယ်။
ဥရောပနဲ့ အမေရိကမှာ ဘာသာရေးလွှမ်းမိုးမှု နိုင်ငံရေးထဲ မရှိတော့သလောက် ကင်းသွားပေမဲ့ အခြားဒေသမှာတော့ မကင်းပါဘူး။
အဆိုးဆုံးက အစ္စလာမ်ပါပဲ၊ ဒါ့ကြောင့်လည်း နိုင်ငံရေးအကူးအပြောင်းတွေမှာ ကျရှုံးနေကြရတာ။
ပါတီမရှိဘဲ ဘယ်လို ဗဟုမဏ္ဍိုင်ဖြစ်မလဲ၊ ဗဟုမဏ္ဍိုင်မဖြစ်ရင် ပါဝါ ညှိမရ၊ ပါဝါ ညှိမရမှတော့ ပဒေသရာဇ်၊ အာဏာရှင်စနစ်ပေါ့။
ပြုံးစိစိ အမေး အဖြေ
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 9/09/2015 - No comments
မေး။ ။ ပါဝါညှိဆိုတော့ ဘယ်မှာ ပါဝါ ဘယ်လောက်ရှိမှန်း မသိတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
ဖြေက။ ။ ဟောဗျာ၊ အခုတောင် ပါဝါ ဘယ်ရှိနေမှန်း မသိကြသေးဘူးလား။ ဦးရွှေမန်းကို သွားမေးကြည့်ကြ။
စထရိတ်တိုင်းမ်က ရိုက်တာရဲ့သတင်းကိုယူပြီး စာမျက်နှာပြည့် ဒေါ်စု ပုံနဲ့ ထွက်လာတယ်။
သတင်းက မြန်မာတွေအတွက် မထူးပေမဲ့ မှတ်ချက်က ထူးသလိုလိုပါ (ပုံ ၂)
ကြိုးနီစနစ်နဲ့ ရှုပ်ထွေးမှု၊ ရှင်းရှင်းလင်းမရှိမှုကြောင့် ပြည်ပရောက် မြန် မာ နှစ်သန်းရှိရာမှာ တစ်သောင်းကိုးထောင်ပဲ မဲပေးဖို့ စာရင်းပေးထားတယ်၊ အဲဒီ နှစ်သန်းကလည်း စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုအောက်နေ ထွက်လာတဲ့လူတွေမို့ လက်ရှိအစိုးရပါတီကို ထောက်ခံမယ့်သူတွေ မဖြစ်နိုင်ဘူး တဲ့။
မနေ့က စကားဆက်ရရင် ပါဝါညှိရာမှာ အမေရိကန်က စံပြပဲ။ ပါတီကြီးနှစ်ခု ဟိုကနိုင်လိုက်၊ ဒီက နိုင်လိုက်။ ပါလီမန်ထဲ ရောက်သွားတော့လည်း ကိုယ့် ပါတီက သမ္မတရဲ့အဆိုပြုချက်ဖြစ်ပါစေ ထောက်ခံချင်မှ ထောက်ခံကြ တာ။
မြန်မာပြည်က အခုအထိတော့ ကလေးကလား ဒီမိုကရေစီအဆင့်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ မယုံရင် အစိတ်သားနဲ့ ဦးရွှေမန်းကိုကြည့်ပါ။ ပါလီမန်ထဲရောက်သွားရင် ပါတီမရှိတော့ဘူး၊ နိုင်ငံတော်ပဲ ရှိတော့တယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို လွှတ်တော်ထဲက ဝန်ကြီးမဖြစ်သေးတဲ့ ဝန်ကလေးတွေ နားမလည်သေးဘူး။
in စာဖတ်သူသို့ပြန်စာ, ဇင်ဝေသော် - on 9/08/2015 - No comments
ကိုအောင်သူ (Aung Thu)
မျိုးစောင့် ဥပဒေ ပြဌာန်းခြင်းဟာ မှားနေတာပါလား ဘုရား။ နောက်ထပ် နည်းဥပဒေဆိုတာတွေ ထပ်ပြဌာန်း ရအုံးမှာပါဘုရား တပည့်တော်တို့ လူ ဝတ်ကြောင်ယောက်ျားများ အတွက် မလွတ်လပ်ထိခိုက်နေပါသော်လည်း မျိုးစောင့် ဥပဒေကို ထောက်ခံပါတယ်ဘုရား။ အရှင်ဘုရားရဲ့ အမြင်ကိုလဲ သိလိုပါတယ်ဘုရား။
၁။ ဘာသာရေးအရ ကြားနေဝါဒပါ (ဆိုလိုတာက အဆိုတင်သွင်းတဲ့ မဘသ နဲ့ပတ်သက်လို့ ကြားနေဝါဒပါ၊ အဖွဲ့အစည်းတိုင်း မိမိယုံကြည်ရာကို တင်သွင်းခွင့်ရှိပါတယ်)။
၂။ နိုင်ငံရေးအရ (အထူးသဖြင့် ဒီမိုကရေစီကို ကူးပြောင်းပြီး ဈေးကွက် စီးပွားရေးစနစ် စဖွင့်တဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့) လက်ရှိအနေအထားက အာရပ်နွေဦး လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ကွက်တိနည်းပါး တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက် စိုးရိမ်စိတ်နဲ့အတူ သဘောမကျမိပါ။
လူလတ်တန်းစား ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားသူတွေဟာ စစ်တပ်ရဲ့အင်အား၊ ကျေး လက်က ဘာသာရေးအင်အားစုရဲ့အင်အားကို မယှဉ်နိုင်ဘဲ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကစ်ဆင်းဂျားရဲ့ World Order ထဲက စာပိုဒ်လေးကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ မှတ်ချက်တော့ သူ ပေးမထားပါဘူး။
နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များနည်းတူ မွတ်စလင်လူဦးရေကို စိုးရိမ်မှု ဖြစ်တယ်ဆိုစေ ဒီမိုကရေစီနဲ့ဈေးကွက် စီးပွားရေး အကူးအပြောင်းမှာ ကျရှုံးခဲ့ရတဲ့ မွတ်စလင်ကမ္ဘာရဲ့ သင်ခန်းစာကို လည်း အခြေအနေအရတော့ စောင်းငဲ့ကြည့်သင့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ဒီ ဥပဒေရဲ့ နိုင်ငံရေးအပေါ် ရိုက်ခတ်မှုအားက မနည်းလှပါဘူး။
in ပြန်လည်မျှဝေခြင်း, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 9/08/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared Amanthul Dragos's post.
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 9/08/2015 - No comments
*မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်ပဲပြောပြော ဘာပြောပြော လက်တွေ့ ဝန်ခံထားတဲ့စနစ်က ဒီမိုကရေစီ။
*ဒီမိုကရေစီရဲ့ မူဝါဒတွေထဲမှာ အဓိက မူဝါဒတစ်ခုက ပါဝါချိန်ခွင်လျာ ညှိခြင်း။
*ပါဝါချိန်ခွင်လျာ ညှိခြင်းက ကမ္ဘာ့အစီအမံနဲ့အကြုံးဝင်သလို ပြည်တွင်းရေး မှာလည်း အကြုံးဝင်တယ်။ ပြည်တွင်းကိုကြည့်ရအောင်၊ ပါဝါက ဘယ်မှာရှိနေသလဲ။
*သူ့ကို ပါဝါ ညှိမယူနိုင်သေးရင် ဒီမိုကရေစီသရုပ်လည်း မပီပြင်သေးဘူး။
*ဒါဖြင့် ဘယ်ပါတီခေါင်းဆောင် သမ္မတဖြစ်သင့်သလဲ?
ဒါက ပုဂ္ဂလိကဆန်တဲ့ မေးခွန်း၊ သီအိုရီမဟုတ်ဘူး။
သီအိုရီအရ ဘယ်သူပဲ သမ္မတဖြစ်ဖြစ် သူ့ကို အတိုက်အခံက ဖိအားပေးနိုင်အောင် အင်အားတောင့်တင်းနေရမယ်။
ဒါဖြင့် ဘယ်ပါတီကို မဲပေးသင့်သလဲ?
ဒါလည်း သီအိုရီမဟုတ်ပြန်ဘူး။ သီအိုရီကပြောတာက ပါဝါဟန်ချက် ညှိယူရမယ်။
ဒီမိုကရေစီကို မြတ်နိုးတဲ့ ရှေးရှေးမျိုးဆက်တွေဟာ ဗဟုမဏ္ဍိုင်စနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ နိုင်ငံရေး ဟန်ချက်ညှိဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။
လက်ထပ်မထားတဲ့ မိခင်တွေအတွက် တဲ့။ စင်္ကာပူမှာမို့သာပေါ့
အင်း ဘယ်လိုပြောရမလဲ၊ လက်ထပ်မထားတဲ့ မိခင်တွေအတွက် တဲ့။ စင်္ကာပူမှာမို့သာပေါ့၊ တို့နိုင်ငံဆို အကူအညီမရတဲ့အပြင် ဒီအမတ်လောင်းေ တာ့ ထောင်တောင် ကျရဦးမယ့်ကိန်းပါလားလို့ တွေးမိလို့ပါ။ နောက်ပြီး ကရုဏာမဲ့၊ စာနာမှုမဲ့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ဗြဟ္မစိုရ်အသာထား ဘယ်လူသားတန်ဖိုးနဲ့မှ ညှိယူလို့ မရတဲ့ "နင့်ဘာသာ ကမျင်းကြောထလို့ရတဲ့ ကလေး၊ ဘယ်သူက ဘာ အကူအညီပေးနေရအုံးမှာတုံး" စတဲ့ ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ပေါက်လွှတ်ပဲစား ကွန်မင့်တွေလည်း ဆိုရှယ် မီဒီယာပေါ် ပလူပျံနေလိမ့်မယ်။
ဆင်းဂဲမားသားဖြစ်ရခြင်းမှာ အကြောင်းတရားများစွာ ပါဝင်နေနိုင်ပါလား။
အဲဒီ ဥပဒေကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ လူမှုရေးပြသနာတွေ၊ လူမသိ သူမသိနေရာ သွား မွေး၊ ကလေးကို စွန့်ပစ်၊ မိခင်နဲ့ကလေး အတူမနေရ မှုတွေ ရှိမလာနိုင်ဘူးလား။
ဒီပြသနာဟာ လူ့သမိုင်းအစကတည်းက ရှိခဲ့သလို နောက်လည်း ရှိနေဦးမှာ ပဲ မဟုတ်လား။
တရုတ်ပြည်ရဲ့ ကလေးတစ်ယောက် ပေါ်လစီကြောင့် အပြစ်မဲ့တဲ့ မွေး ကင်းစကလေးတွေ ဘယ်နှသန်းလောက် စွန့်ပစ်ခြင်း ခံခဲ့ရလေမလဲ။
လိင်ကိစ္စကို အဲသလောက် အလေးထားတဲ့ ဥပဒေနဲ့ နိုင်ငံမှာ ကလေးအဖေ ဘယ်သူဆိုတာ တိတိကျကျ စစ်ဆေးပေးနိုင်တဲ့ DNA စနစ်တွေ လူထုထဲအ ထိ ထွန်းကားနေပြီလား။
အမေရိကန် ဒု သမ္မတဟောင်း ချင်းညေကတော့ လက်စဘီးယမ်းတွေကို လုံးဝကြည့်မရတဲ့လူ ဖြစ်နေရာကနေ သူ့သမီးနှစ်ယောက် လက်စဘီးယမ်းေ တွ ဖြစ်နေတာကို ကြုံတွေ့လိုက်ရပါသတဲ့။
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 9/07/2015 - No comments
သွားလေသူ ဆရာကြီး ဦးဌေးအောင် သင်မပေးနိုင်၊ ပြင်မပေးနိုင်ခဲ့တာကို ဦးလှဆွေကြီးက သင်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ရတယ်။
ဆရာကြီး ဦးဌေးအောင်ကို မန္တလေး နပသထွက် ရဟန်းတွေနဲ့ မိုး ဇလ အဖွဲ့တွေကတော့ ကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်။ ပညာရော၊ စာရိတ္တပါ ပြောစရာမရှိတဲ့ သူတော်ကောင်းကြီး။
သူကလည်း သတ်ပုံတော့ လုံးလုံး ဂရုမစိုက်တာ၊ ဘောမှာ ရေးရင်လည်း စာကြောင်းက ဘယ်တော့မှ မဖျောင့်ဘူး။ သူသင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုတော့ ရင်ထဲအထိ ထည့်ပေးနိုင်တဲ့ ဆရာကြီးပါ။
အခု အက်ဒမင်က သိသင့်တယ်ထင်လို့ စီမံပေးလိုက်တော့ ဦးလှဆွေကြီး ပို့စ်တွေက တက်တက်လာရော။
သူ့စာတွေ ဖတ်မိရာကတဆင့် သတ်ပုံလေးတော့ ဂရုစိုက်ဦးမှပါဆိုတဲ့အတွေး ရလာတာ။
(အခုမှားရင် ပြင်လျက်နဲ့မှားတာလို့ ယူဆပေးကြပါရန်)
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 9/07/2015 - No comments
ကိုယ်တိုင်က ကွန်စတီးကျူးရှင်းပြင်ပြီးမှ ကျောင်းထိုင်ဖြစ်၊
ကျောင်းထိုင်ဖြစ်မှလည်း စိတ်ကူးထဲက ကောင်းမယ်ထင်တာတွေလုပ်၊ ပိတ်နေတဲ့ တံခါးတွေဖွင့်၊ စာသင်ခန်းတွေကို အနားမရှိ အသုံးချ... စတာတွေ လုပ်ခွင့်ရလာလို့ ဒေါ်စုကို နားလည်တယ်။
ပြသနာက မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ဒေါက်တာ လင်း (Dr. Lim) မရှိဘူး။ ဒေါက်တာ မှောင်တွေပဲ များနေတယ်။
အမြင် အတွေး နဲ့ အတွေး အမြင်
in Politics, ပြန်လည်မျှဝေခြင်း - on 9/07/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared Dhammabheri Ashin Viriya's post.
အမြင် အတွေး နဲ့
ဘယ်သူမဆို ကိုယ်မြင်သလောက်ပဲ ကိုယ်တွေးတတ်ကြတာက
ပိုတွေးနိုင်လို့လဲ ပိုမြင်တတ်သူတွေ ကိုတွေ့လာတဲ့အခါမှာ-
ကိုယ့်ထက် ကိုမြင်,ပိုတွေး၊ပိုတွေ ပိုမြင်တာတွေမှန်သမျှကို
ရေထဲကငါးနဲ့ ကုန်းပေါ်ကလိပ်တို့ တွေ့သလိုပေါ့-
ကုန်းလိပ်က ကုန်းပေါ်မှာ ကိုယ့်ခြေထောက်နဲ့ကိုယ်
“ရေညှိနဲ့တီကောင်မရှိတဲ့နေရာ ဘယ်ကလာ စားစရာစုံရမှာလဲ"
ကိုယ်မြင်နိုင်သလောက် ကိုယ်တွေးပြီး ကိုယ်တွေးမိတာကလွဲလို့
ဘာကိုမှအကောင်းမထင်တတ်တဲ့ ဒီငါးကို ဘာမှ လေကကြီးအကြောင်း ပြောလို့မရသလိုဖြစ်နေမှာပါပဲ။
ကိုယ်မြင်သမျှ ကိုယ်တွေးပြီ ကိုယ်တွေးနိုင်သမျှထက်
လယ်တီဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဥတ္တမပုရိသဒီပနီ မှာ-
မေဏ္ဍကသေဌေးက -အိမ်ပေါက်ကျွန် ငပုဏ္ဏကို
ကျွန်နဲ့မတူအောင် အခွင့်ထူးတွေ ပေးထားတယ်။
ဒါကို ငပုဏ္ဏက သိပ်ဂုဏ်ယူတယ်။
“လောကမှာ ငါလောက်ကံကောင်းသူ ဘယ်သူ
ငပုဏ္ဏကိုပဲ အထင်ကြီး အားကျပြီး ဆုံမိတဲ့အခါ
ဒါကိုပဲ ငပုဏ္ဏကလဲ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားတယ်။
အလှူလုပ်တဲ့အခါ-သေဌေးက ပုဏ္ဏကိုလဲ လှူဖွယ်ဝတ္ထု
“ဘဝဆက်တိုင်းမှာ ဤသေဌေးလို သခင်မျိုးနဲ့သာ
(ဖတ်ရင်း မရယ်ကြနဲ့၊သူ့အမြင် သူ့အတွေးမှာ
"ဣစ္ဆိတံ ပတ္ထိတံ တုယှံ ခိပ္ပမေဝ သမိဇ္ဇတု"နဲ့
ဘဝဆက်တိုင်း ကျွန်ဖြစ်ခွင့် ရသွားပါသတဲ့။
ဘာကိုမှ မကြည့်၊ ဘုရားမျက်နှာပဲကြည့်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အစစ်ကြီးပါ
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 9/07/2015 - No comments
၁။ သူတို့မြင်တဲ့ မင်္ဂလဝိဟာရ ရဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးလမ်းစဉ်။
တကယ်ပြန်ကြည့်တော့လည်း ၁၀ နှစ်အတွင်း အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီးပါ။ ဒီ အပြောင်းအလဲတွေရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ စင်္ကာပူလိုနေရာမှာ ဘယ်ဘာသာစကားနဲ့ပဲ သင်သင်၊ ထေရဝါဒလမ်းစဉ်နဲ့ညီရင် လက်ခံရမယ်၊ အားပေးရမယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုပါ။
၂။ သူမပါရင်လည်း မပြီးပါဘူး။ သံဃာက သံဃာ၊ ဘုရားသားက ဘုရားသားပဲ။ သီဟိုဠ်တွေ မြန်မာတွေ ခွဲမနေနိုင်ဘူးဆိုပြီး သီဟိုဠ်ဘုန်းကြီးသာ ကျောင်းထိုင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ကွန်စတီကျူးရှင်းကို ရဲရဲကြီးပြင်သွားတဲ့ ဥက္ကဋ္ဌပါ။ ဘာကိုမှ မကြည့်၊ ဘုရားမျက်နှာပဲကြည့်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အစစ်ကြီးပါ။ သာသနာအတွက် ကျေးဇူးတင်ထိုက်လှပါတယ်။
အခု စင်္ကာပူမှာ သာသနာပြုနေတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဒီကျောင်းရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပညာရေးနဲ့လွတ်တာ (ဆန်းဒေး စကူး၊ ပါဠိကောလိပ်) သိပ်မရှိပါဘူး။
မင်္ဂလာရှိတဲ့ မနေ့ညက ဒိုင်ယာလော့ဂ်
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 9/06/2015 - No comments
(မုဒိတာပွားလိုပါက ဖတ်ကြည့်စေလိုပါတယ်၊ နှစ်ဖက် အပေးအယူမျှတဲ့ စေတနာစကားတွေပါ။
ဦးဇင်း ( ဇင်ဝေသော်) ဘုရား...
ရိုသေလေးမြတ်စွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရား။ တပည့်တော်သည် မြန် မာ အင်တာနက်စာကြည့်တိုက် ( page ) ၏ အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါသည်။ တပည့်တော်တို့ သည် online တွင် ညီအကို မောင်နှစ်မအရင်းအခြာများ သဖွယ် ချစ်ခင်ရင်းနှီးကြသူတစ်စုက မိမိတို့နိုင်ငံလူမျိုးနှင့် လူမှုအဖွဲ့ အစည်း အတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းဖွယ်ရာ တစ်စုံတစ်ရာကို တတ်စွမ်းသမျှစုပေါင်းဆောင် ရွက်ကြရန် ဆွေးနွေးမိရာမှ ဤ စာကြည့်တိုက်လေးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ သဗ္ဗဒါနံ ဓမ္မဒါနံ ဇိနာတိ... ဟူသော မိန့် မှာချက်နှင့်လည်း အညီဖြစ်စေရန် စာကြည့်တိုက် တည်ထောင်ဆောင်ရွက်ကြရန်ရွေးချယ် ခဲ့ကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။
အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ တပည့်တော်တို့ ၏ Society အနေဖြင့် ပညာခေတ် စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်နိုင်စေရန် အသိပညာဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် စာအုပ် စာတမ်းများကို online မှရှာဖွေစုစည်းပြီး ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြင့် မိမိတို့Society အား တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ အလုပ်အကျွေးပြုရန် ဖြစ်ပါသည် ဘုရား။
ဆောင်ရွက်ရာတွင် တပည့်တော်တို့ ၏ အချိန် ငွေကြေးနှင့် အခြားသော အား ထုတ်မှုများပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းလျက် စေတနာသက်သက်ဖြင့်သာဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ စာကြည့်တိုက် Page တွင် အရှင်ဘုရား ( ဇင်ဝေသော်) ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သော လီကွမ်ယူရဲ့ နားဝင်မချိုသောအမှန်တရားများ အမည်ရှိ စာအုပ်ကို စာကြည့်တိုက်တွင် စာချစ်သူများ၏ တောင်းဆိုမှုအရ အခြားသော စာကြည့်တိုက် web/ page / blog များတွင် လိုက်လံရှာဖွေပြီး တင်ပြပေးခဲ့မိပါ သည်။ ဘာသာပြန်ဆိုသူ အရှင်ဘုရားအနေဖြင့် Strate Time နှင့် သက်ဆိုင် သူသို့ အသိပေးပန်ကြားလျက်ပြန်ဆိုခဲ့သည့်တိုင် တပည့်တော်တို့ မှာ စာအုပ် တင်ပြမှုအတွက် အရှင်ဘုရားအား လျောက်ထား ပန်ကြားခွင့်ပြု ချက်ေ တာင်းခံခြင်း မပြုမိခဲ့ပါဘုရား။ ဤသို့ ဖြစ်ခဲ့ရခြင်းမှာ တပည့်တော်တို့ သည် စာအုပ်ကို pdf file ဖန်တီးသူများမဟုတ်ဘဲ စာပေဝါသနာရှင်များ၏ တောင်း ဆိုမှု ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အခြားသော site များမှ တဆင့်ရယူခဲ့ရခြင်းနှင့်
အရှင်ဘုရားကိုလည်း မည်သို့ မည်ပုံ ဆက်သွယ်လျောက်ထားရမည်ကို မသိရှိခဲ့ခြင်းတို့ ကြောင့် ယခုလိုဖြစ်ခဲ့ရပါသည်ဘုရား။
ယင်းအတွက် အနူးအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။ မေတ္တာရှေ့ ထားလျက် ခွင့်လွှတ်သည်းခံတော်မူပါရန်လည်းရိုသေစွာလျောက်ထားပါသည်ဘုရား... ။
တပည့်တော်တို့ သည် မည်မျှပင်စေတနာကောင်းဖြင့်ဆောင်ရွက် သည်ဖြစ်ေ စကာမူ အရှင်ဘုရား ( ဇင်ဝေသော်) မှ ယခုကဲ့သို့ အကြောင်းကြားလာသည့် အခါ စာအုပ်တင်ပြမှုကို ဆက်လက်ထားရှိရန်မသင့်ပါဘုရား..။ သို့ ပါ၍ အရှင်ဘုရားဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သည့်စာအုပ်ကို Page နှင့် စာကြည့်တိုက်၏ Website တွင်ဖော်ပြထားခြင်းမှပြန်လည်ဖြုတ်ချပေးပါမည်ဖြစ်ကြောင်း ရိုသေလေးမြတ်စွာ လျောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရား။
အမှန်တော့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် အဆင့်မပြေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဇင်းဆန္ဒက လူများများဖတ်လေလေ အကျိုးရှိလေလေပါ။ တင်ပြီးသား စာအုပ်ကို ဖြုတ်ချစရာမလိုပါ၊ ဇင်ဝေသော်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တင်ပါသည် ဆိုတာလေး ဖြည့်စွက်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဦးဇင်းကိုယ်တိုင် ဓာတ်ပုံ၊ စာသားများအားလုံး ယခု ဘာသာပြန်စာအုပ်မှလွဲပြီး အွန်လိုင်းစသည်မှာ အသုံးမပြုပါလို့ ဝန်ခံလက်မှတ်ထို့ခဲ့ရလို့ပါ။ စောစောက ဦးဇင်းခွင့်ပြုချက်အရ တင်တယ်ဆိုတဲ့ စာကြောင်းပါရင် စထရိတ်တိုင်း ရဲ့ ကော်ပီရိုက်ကိစ္စကို ပြသနာဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် ရှင်းလို့ရပါတယ်။
တပည့်တော် ဒါဆို မြန်မာပြည်သူတွေအကျိုးအတွက် ဦးဇင်းရဲ့စေတနာ အတိုင်း ပြန်တင်ခွင့်ပြုပါလို့ တောင်းခံအပ်ပါသည်ဘုရား
ဦးဇင်းခွင့်ပြုချက်စာသား ရေးသား၍ ပြန်တင်ပါရစေဘုရား
တပည့်တော်လည်း အကျိုးရှိတဲ့စာပေမို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မတတ်နိုင် သူတွေ ဖတ်၍ အသိပညာတစ်ခု တိုးစေရန် ရည်သန်တဲ့အတွက် ခုလို ဦးဇင်းကိုယ်တိုင် ခွင့်ပြုလိုက်တော့ အရမ်း ဝမ်းသာသွားရပါတယ်ဘုရား
လီကွမ်းယုသေပြီးနောက် သူ့စာ၊ သူ့ဓာတ်ပုံတွေကို ပိုပြီး တင်းကြပ်နေလို့ ပြသ နာမတက်ခင် ကြိုဝင်တာမို့ စကားရင့်သီးသွားရင် နားလည်ပေးပါ။ လူထုအကျိုး ဆက်သယ်ပိုးနိုင်ပါစေ။
တပည့်တော်မတို့ ဘက်က လိုတာပါ ဘုရား
in ပြန်လည်မျှဝေခြင်း, သူတို့ဆီကသတင်း - on 9/06/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared Myat Thar's post.
ဆီးရီးယန်းကလေးငယ်လေး လှေမှောက်ပြီး ရေနစ်သေဆုံးသွားတဲ့ ဓါတ်ပုံကို မြင်တဲ့အခါ အကြီးအကျယ် တုန်လှုပ်သွားသူဟာ ဥရောပနိုင်ငံတွေ ဖြစ်နေတယ်။ သမိုင်းကြောင်းထဲက ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲတွေ၊ လတ်တလော ဥရောပမှာ မူဆလင်အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရမှုတွေကို ကျော်လွန်မေ့ပျောက်ပြီး မူဆလင်ဘာသာဝင် ဆီရီးယန်း ဒုက္ခသည်များကို တိုင်းပြည်အတွင်း ဒုက္ခသည် အဖြစ်နေထိုင်ခွင့်ကို ချက်ချင်းခွင့်ပြုပြီး ခုစတင် လက်ခံနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာမဏီ မြူးနစ်မြို့မှာ အခုကြိုဆိုပွဲတွေ လုပ်နေပါတယ်။ နော်ဝေက လူလေးသောင်း လက်ခံဖို့ ကတိပြုပြီး မြို့အလိုက်ခွဲဝေနေရာချထားဖို့ ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ အခြားဥရောပ နိုင်ငံများကလည်း စတင်လုပ်ဆောင်နေပါပြီ။ အသက်ကိုရင်းပြီး ပြေးကြသူတွေ၊ ကလေးငယ်တွေ ရေနစ်သေဆုံးသွားတဲ့ သတင်းတွေကို သူတို့ မခံစားနိုင်ကြပါဘူး။
လူ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ အသိတရားကနေ ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ ဒီနေရာမှာ ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့နေရပါတယ်။ အကြောက်တရား၊ အမုန်းတရားတွေကို ကျော်လွန်ဖောက်ထွက်ပြီး ၊ မေတ္တာတရားနဲ့ ကြင်နာမှုဟာ ယဉ်ကျေးသော လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ အရာရာထက် ပိုမိုအားကောင်းကြောင်း ပြသလိုက်ပါတယ်။
တချိန်ထဲမှာဘဲ အင်မတန်မှ ချမ်းသာလှတဲ့ ရေနံသူဌေး အာရပ်နိုင်ငံများကတော့ သူတို့နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်သလိုနေနိုင်တာကိုလည်း တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ အပေါဆုံးက ငွေကြေးဖြစ်တဲ့အတွက် ငွေကြေးလိုရင်ပေးမယ်၊ ငါ့တိုင်းပြည်ထဲတော့ လာအရှုတ် မခံနိုင်ဘူး ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေလို့ ဝိုင်းဝန်းရှုံ့ချခံနေကြရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း သူတို့ကတော့ အေးဆေးပါဘဲ။ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်တဲ့ စာနာညှာတာတတ်တဲ့ အကြင်နာ မေတ္တာတရား မရှိလဲ ရုပ်ဝတ္ထုတွေနဲ့ အင်မတန်ချမ်းသာမှုတွေ ပြည့်စုံနေရင် ရပါတယ်လို့ ထင်ကြပုံပါဘဲ။
အကယ်၍များ အာရှသားတွေ ဥရောပသားတွေလောက် အသဲမနုကြဘူးဆိုရင်၊ အဲ့ဒီလောက် လုပ်စရာ မလိုပါဘူးဆိုရင်
လူ့သမိုင်းတလျှောက် ယဉ်ကျေးမှု အစောဆုံးဆိုတာကို ဘယ်လိုများမြင်ကြပါသလဲ သိချင်မိပါတယ်။
Labels: ပြန်လည်မျှဝေခြင်း, သူတို့ဆီကသတင်း
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကို ပလပ်စတစ် ဆာဂျူရီလုပ်ပေး
in ဇင်ဝေသော်, သူတို့ဆီကသတင်း - on 9/06/2015 - No comments
ကြွားနေရတာနဲ့ ဒီသတင်းလေး မနက်က မတင်မိဘူး။ ကျန်း၊ တောင်ကိုရီးယားကတော့ မနိုင်ဘူး၊ အလုပ်မရှိ ကြောင်ရေချိုးပဲ ပြောပြော ဘာပြောပြော။ ခွေးလို၊ ကြောင်လို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကို ပလပ်စတစ် ဆာဂျူရီလုပ်ပေးရတာ အတော်လေး ခေတ်စားနေပါသတဲ့။ ကျန်းမာရေးအတွက်ရော ကြည့်လို့ ပိုလှအောင်အတွက်ရောပါ တဲ့။
in ဇင်ဝေသော် - on 9/06/2015 - No comments
ရဟန်းဝတ်ဖော်ပြထားပြီး လီကွမ်းယု၊ ဟန်တင်တန်နဲ့ သူတို့ စာအုပ်အမည်တွေပါ အတိအကျထည့်လိုက်ရင် ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ အမြင်မတူသူတွေ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်နိုင်လို့ ရှောင်ရေးသွားခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် ဂလိုဘယ် ပေါ်လစ်တစ်ဆိုတဲ့စကားကို ရှောင်ရေးသွားပါတယ်၊ လေးစားစရာ၊ အတုခိုးစရာပါ။ တလောက မြန်မာ ဂျာနယ်တစ်စောင်နဲ့တော့ ကွာလှပါတယ်။
ဒီအပိုဒ်မှာ မလိုတမာရေးမယ်ဆို "ရဟန်းဝတ်ပြီး ယောက်ျားလိုလို၊ မိန်းမလိုလို ဇင်ဝေသော်ဆိုတဲ့ ကလောင်အမည်နဲ့ မဆီမဆိုင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးတွေ ဘာသာပြန်နေတဲ့" လို့ရေးရင် ရတာပဲ။ အယ်ဒီတာဟာ စာလုံးပေါင်းအပြင် စားရေးသူရဲ့ ပုဂ္ဂလိကဆန်တဲ့ စွပ်စွဲမှုတွေကိုလည်း တည်းဖြတ်ရပါတယ်။ ဒါမှ စံဝင်တဲ့ အယ်ဒီတာဖြစ်ပါတယ်။
သူများပြောတဲ့ ကိုယ့် ပရိုဖိုင်။
အဘိဓမ္မာသင်တန်း ပို့ချတယ်ဆိုတာကလွဲရင် အမှန်တွေပါ။ သူတော်ကောင်းတွေ သင်ယူနိုင်၊ ပို့ချနိုင်အောင် နေရာစီစဉ်ပေးရုံပါ။
မြန်မာပြည်ရဲ့ လက်ရှိအနေအထားတွေကြောင့် ကစ်ဆင်းဂျားစ...
အတိုက်အခံပါတီကို မဲအနိုင်ရအောင် အကူအညီပေးတဲ့ အစိုး...
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင်အတွက် လူတစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာရ...
*၉၂ ပါတီ စာရင်းပေးပေမဲ့ USDP ပါတီနဲ့ NLD ကသာ တစ်နိ...
"လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင်" စာအုပ်နဲ့ ကြိုဆိုလိုက် ...
ဘာကိုမှ မကြည့်၊ ဘုရားမျက်နှာပဲကြည့်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အစ...
ကစ်ဆင်းဂျား ပြောတာနော်၊ စာစစ်ရင်း တွေ့မိလို့ တင်လိ...
ပြောသွားတာ အတိအကျပဲ။ လိုက်မယ်ဆို ကွင်းဆက်တွေ။
အချင်းချင်းသာ ကစောင်းစေးနဲ့ မျက်ချေး
ဇင်ဝေသော်ရဲ့ မထွက်သေးတဲ့ စာအုပ်
အနာဂတ်အမြင် ၂ (ကစ်ဆင်းဂျား၊ World Order)
ဘီးလ် ဂိတ်ဆိုတဲ့လူရေးတဲ့ ဆောင်းပါး
တရုတ်သမိုင်းကို သိရင် မြန်မာ့သမိုင်းအရွေ့ကို ၉၀ ရာ...
သေနတ်ကြောင့် မဟုတ်ဘူး၊ လူရမ်းကားစိတ်ကြောင့်
အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်တို့ကြားက အခြေခံ ကွဲလွဲမှုများ
မဘသနဲ့ ဆရာတော် ဦးတိလောကာဘိဝံသ အကြောင်း
တောမီးလောင် တောကြောင်လက်ခမောင်း ခတ်
ကျန်တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေလည်း အမျိုးချစ်ပါတယ်
ဒီထက် နယ်ပယ် ကျယ်ကျယ် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ မဲချူလို့...